LAHATENIN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALAM-PANORENANA NANDRITRA NY FOTOAM-PITSARANA AMPAHIBEMASO NAMOAHANA NY VALIM-PIFIDIANA OFISIALIN’NY FIHODINANA VOALOHAN’NY FIFIDIANANA NY FILOHAN’NY REPOBLIKA
Andriamatoa sy Ramatoa isany lehiben’ny masoihivoho vahiny eto Madagasikara ,
Ramatoa Ben’ny tananan’Antananarivo,
Ny andininy faha 116.5 amin’ny ny Lalampanorenana dia milaza fa ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana no “manambara ny vokatra ofisialin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, solombavambahoaka ary ny fakana hevitra amin’ny alàlan’ny fitsapan-kevi-bahoaka”. Ity andrim-panjakana ity dia miandraikitra ny maha ara-dalàna sy mamoaka ny valim-pifidianana.
Nisy ny fanitsiana ny diso, nisy ny fanarenana ny lesoka, nisy ny fitadiavana ny tena valim-pifidianana marina teo anivon’ny birao pifidianana. Tao aorinan’izany asa be izany, na dia fohy aza ny fotoana nomen’ny lalàna, no namoahana an’izao valim-pifidianana ofisialy izao.
Vita iny ny dingana iray lehibe na dia nisy aza ny sakana sy ny faminganana maro samy hafa. Ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana dia nanao ny asany araka ny rariny sy ny hitsiny. Ampahatsiahivina ny tsirairay fa tsy ny Fitsarana no mifidy ny mpilatsaka ho fidina ho lany fa ny vahoaka Malagasy izay ny mpifidy rehetra no misolo-toerana azy. Ny asan’ny Fitsarana dia ny hampanaja ny tena safidin’ny mpifidy. Raha resaka fifidianana dia tsy misy ny fahagagana na ny magie.
Mila misintona lesona mikasika ny fihodinana voalohany isika. Ohatra, ny CENI sy ireo mifanandrina amin’ny fihodinana faharoa dia tokony miara misalahy mametraka ny resaka informatika, hitokisan’ny rehetra. Ny tombotsoan’ny mpifidy no lolohavina ambonin’ny loha amin’izany ary ankitsipo no anaovana azy. Tokony misy fepetra ho raisina ihany koa hizarana ny karatry ny mpifidy izay be loatra no tavela. Tohizana ihany koa, na dia fohy aza ny fotoana, ny fanabeazana ny olom-pirenena mikasika ny fifidianana. Sombitsombiny ihany ireo fa mila hatsaraina amin’ny ankapobeny ny fikarakarana ny fifidianana.
← Didim-pitsarana laharana faha 11-HCC/AR tamin’ny 28 novambra 2018 anambaràna ny vokatra ôfisialin’ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika natao ny 7 novambra 2018.	TRADUCTION DU DISCOURS DU PRESIDENT DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE LORS DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS OFFICIELS DU PREMIER TOUR DE L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE LE VENDREDI NOVEMBRE 2018 →